के तपाईंले आफ्नो भर्खरको अभियानको परीक्षण गर्नुभयो? | Martech Zone
शुक्रबार, जनवरी 7, 2011 शुक्रबार, मार्च 1, 2013 Douglas Karr
मैले आज सर्वश्रेष्ठ खरीद पुरस्कार पुरस्कारबाट एक सुन्दर ईमेल प्राप्त गरें। राम्रोसँग डिजाइन गरिएको ईमेलसँग ठोस प्रस्तावहरूको साथ कुरकुरा इमेजरी थियो। एउटा प्रस्ताव जुन मेरो आँखामा पक्रियो त्यो १G जीबी एसडी कार्ड थियो 16 २..24.99। को लागि।
मैले लिंक क्लिक गरेँ र साईन ईन गर्न भनियो। मैले साईन ईन गर्ने प्रयास गरें र पछि असफल भयो। मैले २ ब्राउजरहरू परिक्षण गरें, मेरो खाता नम्बर र मेरो ईमेल ठेगाना प्रयोग गरेर ... र पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्न पनि सकेन। मैले ट्विटर र @Coral_BestBuy मा गुनासो गरे मलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्नुभयो। उनले वर्णन गरिन् कि म वास्तवमै बेस्ट बाइमा लग ईन गरिरहेछु - पुरस्कार क्षेत्र होईन, मलाई बेस्ट बायमा दर्ता गर्न आवश्यक छ किनकि मसँग पहिले नै इनाम क्षेत्र खाता छ।
त्यसैले मैले दर्ता गरें। रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियाको एक बिन्दुमा, मैले मेरो पुरस्कार क्षेत्र नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्‍यो - म ती दुई खाताहरू लि link्क गर्न सक्दछु। एकचोटि मैले त्यसलाई सबमिट गरेपछि, पृष्ठ हाइलाइट गरिएको संख्याको साथ केवल ताजा हुन्छ। कुनै त्रुटि सन्देश छैन। म अग्रिम गर्न सक्दिन वा वास्तविक अफरमा फर्किन सक्दिन। मैले छोडिदिए।
धेरै मानिसहरू मैले गर्न भन्दा धेरै अघि नै छोडिदिएका थिए, तर म यो हेर्न चाहान्छु कि यो कति गाह्रो छ। यहाँ वास्तविक समस्या यो हो कि ईमेल टोलीले केहि डरलाग्दो अभियान परिणामहरू अहिले पाइरहेको छ ... यद्यपि समस्या वेब साइटको साथ छ। कसैलाई यति धेरै चरणहरू पार गर्न आवश्यक पनी कुनै पनि उपभोक्तालाई निराश पार्ने कुरा हो।
प्रक्रियामा प्रत्येक अतिरिक्त चरणले तपाईंको रूपान्तरण 50०% गिराउने छ। म त्यो नम्बर बनाउँदै छु, तर म निश्चित छु कि वास्तविक प्रतिशत अझ खराब छ। अभियान उपभोक्ताहरूलाई अधिकतम बनाउन तपाईंले आफ्नो उपभोक्तालाई सरल, सावधानीपूर्वक मार्गहरू रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। दर्ता आवश्यक छ, २ प्रणालीमा दर्ता, प्रयोगकर्तालाई भ्रमित गर्दै…। यो सबै गर्न जान्छ किनमेल कार्ट त्याग.
अन्तिम पटक कहिले तपाईले आफ्नो साइटमा डेमो, डाउनलोड, वा खरीदको परीक्षणको लागि दर्ता गर्नुभयो? म यो हरेक चोटि गर्न कोसिस गर्दछु र सँधै भयानक त्रुटिहरू फेला पार्दछु। वास्तवमा, जब मैले अप्ट-इन ईमेल सुरू गर्‍यो, मसँग मेरो साइटमा एक सदस्यता लिंक थियो जुन गलत पृष्ठमा दर्साइरहेको थियो! आउच!
टैग: अभियान परीक्षणईमेलईमेल परीक्षणपरीक्षण
वर्डप्रेस र मेरो अभियान प्रो को साथ ईमेल स्वचालन